प्रचण्ड र माधव नेपाल फुट्ने दिन कहिले होला ? – Halkhabar kura
१५ पुष २०७७, बुधबार १५:४३
प्रचण्ड र माधव नेपाल फुट्ने दिन कहिले होला ?
नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलन विभाजन र एकताको प्रक्रियाबाट अगाडी बढेको छ । विभाजन र एकता नेपाली बामआन्दोलनको कुनै नयाँ प्रक्रिया होइन । तर यो विभाजन र एकताका पछाडी बैचारिक पक्ष कम र पदीय महत्वकाँक्षाको वढी भुमिका रहेको छ । २००६ सालमा स्थापित भएको कम्युनिष्ट पार्टी अहिलेसम्म कतिपटक विभाजित भयो होला । कतिपल्ट एकता प्रक्रियामा अगाडी वढयो होला । यसको इतिहास यहाँ लेखिरहनु नपर्ला । तर एउटा पछिल्लो सन्दर्भ चाही यहाँ उल्लेख गर्न नै पर्दछ । २०५४ सालमा तत्कालिन एमालेबाट बामदेव गौतमले किन माले पार्टी बनाउनुभयो ? फेरी उहाँले किन त्यो पार्टीलाई एमालेमै लगेर बुझाउनुभयो ? सत्र हजार निहत्या मान्छेको वलि चढाउने माओवादी आन्दोलनको अगुवा पुष्पकमल दाहालले नेपाल भुमिमा अवलम्वन गरेका माओका विचारहरु र पछि प्रचण्डपथका नाममा विकास गरिएका सिद्धान्तहरु एकताका नाममा किन जवजको पाउमा राख्नु परेको होला ? फेरी नेकपाबाट अलग नभएपनि यसको अभिनय गर्दै बल्खु पुगेर मदन भण्डारीको सालिकमा प्रचण्डले किन माल्याअर्पण गर्नु परेको होला ? यसका पछाडीका कारण र परिणामका वारेमा नेपाल कम्युनिष्ट आन्दोलनको अध्ययन र अभ्यास गर्ने महानुभावहरुले सही निष्कर्ष निकाल्नु नै हुनेछ ।
तर यहाँ उल्लेख गर्नुपर्ने एउटा सन्दर्भ के छ भने २०५० जेष्ठ ३ गते तत्कालिन एमालेका महासचिव जननेता मदन भण्डारीको रहस्यमय दुर्घटनामा परि मृत्यु भयो । उहाँले नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई एउटा नवीन र सीर्जनशील विचार जनताको बहुदलीय जनवादको विचार दिएर जानुभयो । उहाँको मृत्युपछि तत्कालिन एमालेको नेतृत्व कसले सम्हाल्ने ? उहाँको विचारलाई कस्ले अगाडी वढाउने भन्ने सन्दर्भमा निकै बहस र छलफलहरु भए । त्यो समयमा नेकपा एमालेमा रहेका स्थायी कमिटीका सदस्यहरुले नेकपा एमालेको महासचिवको रुपमा कमरेड केपी शर्मा ओलीलाई प्रस्ताव गरेका थिए । तर त्यतिवेला केपी शर्मा ओलीले अहिले म महासचिव बन्दिन, तत्कालिन परिस्थितिमा माधव नेपाललाई महासचिव बनाएर अगाडी बढौँ भन्ने प्रस्ताव गरेपछि कमरेड माधव नेपाल नेकपा एमालेको महासचिव बन्नु भएको कुरा कम्युनिष्ट आन्दोलनका साक्षर हौँ भन्नेहरुलाई राम्रैसँग थाहा हुनु पर्दछ । यदी थाहा छैन भने पनि यो तथ्यको खोजी गर्ने काममा सवै पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरु लाग्नुपर्दछ ।
हामी सवैलाई थाहा छ, मदन र जवजकै लोकप्रियतामा २०५१ सालमा नेकपा एमालेले बहुमतको सरकार बनायो । त्यो सरकारको उपप्रधान तथा रक्षा मन्त्रीको जिम्मेवारी कमरेड माधव नेपालले पाउनु भयो । महत्वकांक्षी र अस्थिर राजनीतिक चरित्रका पर्यायबाची नाम कमरेड बामदेव गौतमलाई पार्टी विधानमै व्यवस्था नभएको उपमहासचिव पद सिर्जना गरेर बल्खु जिम्मा लगाउनुभयो र कमरेड नेपालले विग्रिएको टेप रेकर्डर जस्तो जवजको व्याख्या गरेर संविधान सभाको निर्वाचन २०६४ सम्म आउँदा एमालेलाई ३३ सीटमा खुम्च्याउनुभयो । नबुझेपनि बुझेजस्तो गर्ने, जबजको सिद्धान्त विकासमा आफनो महत्वपुर्ण योगदान रहेको बताउने, प्रचण्ड कमरेड ५० जनाको नेता नहँुदा विशाल भीमकाय एमालेका महासचिव र सरकारको उपप्रधानमन्त्री बनिसकेका हाम्रा कमरेड माधव नेपाल अहिले प्रचण्डको दोस्रो बरियातको अध्यक्ष वन्न आफनो राजनीतिक करियर दाउमा राखेर महासचिव देखी प्रधानमन्त्री बनाउने सम्मको महत्वपुर्ण सहयात्री कमरेड केपी शर्मा ओलीलाई धोका दिनु भएछ भनेर हामी कसरी पत्याऔ ? तर वास्तविकता यही हो, उहाँमा प्रतिशोध होला, हिनता, कुण्ठा र महत्वकांक्षाले उहाँको दिमाग भरिएको होला, त्यसैले उहाँ मदनको अनुयायी बनेर पनि प्रचण्डको भरिया बन्न लालायीत हुनु भएको होला, तर हामी कार्यकर्तालाई त उहाँको होस चाँडै खुल्ने छ भन्ने विश्वास र भरोसा छ ।
प्रचण्ड कमरेड गाउँको पाठशालाको शिक्षक हुनुहुन्थ्यो ? माओलाई अलिअलि पढनु भएछ । जेएनयु पढेका बाबुरामसँगको उठबसले उहाँलाई नेपालमा माओवादको अभ्यास गर्न मन लाग्यो । निर्दोषहरुको प्राण लिने र पावर आर्जन गर्ने उहाँलाई भोक लाग्यो । माओलाई नबुझेपनि माओवादका नाममा शुरु गर्नु भयो माओवादी आन्दोलन । सत्र हजारको ज्यान लिनुभयो । आफुलाई नेपाली माओको रुपमा चिनाउन कोशिस गर्नुभयो । लाखौ मानिसहरुलाई अङभङ बनाउनु भयो । आफ्ना छोरी बुहारी र भाई भतिजाहरुलाई पद र प्रतिष्ठामा पुरयाउनु भयो । भन्नका लागि माओवाद भनेपनि जवजको पाउमा परेर केपी शर्मा ओलीसँग सम्झौता गर्नुभयो ।
हाम्रा केही जवजका अनुयायीहरु, सोझै भन्दा कमरेड माधव नेपाल । जवजका नाममा उहाँलाई प्रधानमन्त्री र पार्टी प्रमुख बनेर पार्टी र मुलुक सञ्चालनको अवसर दिएको थियो । अहिले उहाँहरुको काँधमा राखेर आफनै नेता कार्यकर्तामाथि प्रचण्डले बन्दुक पडकाउदा हामी जवजका अनुयायीहरुको शीर कति निहँुरिएको होला ? यो कुरा माधव कमरेडलाई अलिकति पनि थाहा छैन । मात्र उहाँलाई नवौँ महाधिवेशनमा आफु पार्टी अध्यक्षमा पराजित भएको कुण्ठा र आवेग मात्र थाहा छ ।
त्यसैले हामी नेकपाका नेता कार्यकताले बुझनु पर्ने कुरा के हो भने हाम्रो माधव कमरेडले एकदिन यो तथ्यलाई बुझनु हुनेछ । त्यसैले हामी यो वा त्यो नेताका नाममा विभाजित हुनुको कुनै अर्थ हुँदैन । नाम माओको बेच्ने तर पद र पैसाभन्दा कहिले माओवादी बन्न नसकेका प्रचण्ड र जवज नबुझेपनि प्रन्ध वर्षसम्म जवजको गायन्त्री मन्त्र सुनाएर महासचिव हत्याएका माधववीचको सहकार्य दीर्घकालिन हुन सक्दैन, उहाँहरुवीच फुट निश्चित छ ।
एकदिन कमरेड माधव नेपाल पनि कमरेड बामदेव गौतमजस्तै म आफ्नै मुलघर फर्किए भनेर तत्कालिन एमालेमा विलय भएजस्तै कमरेड केपी ओलीसँग सहकार्य र सहमतिको हात वढाउनु हुनेछ । त्यो दिन त्यति टाढा छैन । देशभरीका नेता कार्यकर्ताले यो अवश्यवमभावी तथ्यलाई स्वीकार गरेर आफ्नो राजनीतिक भविष्यको सुनिश्चित गर्न आवश्यक छ । यो तथ्यलाई कमरेड माधव नेपालले पनि विर्सन हुदैन, की आफनो महासचिवको १५ बर्षे अवधि गलत थियो भनेर स्वीकार गर्न आवश्यक छ, यदी स्वीकार गर्न सक्नुहुन्न भने र बचेखुचेको राजनीतिक इज्जत बचाउनु हुन्छ भने प्रचण्डको बन्दुक वनेर नपडकिएकै जाती । आगै जे गरेपनि मर्जी यहाँकै र यहाँलाई बुझने नेकपाका नेता कार्यकताहरुको । तर ठोकुवा गरेर भन्छु तपाई एकदिन माधव कमरेडले आफनो भुलको प्रायश्चित गर्नु हुनेछ र केपी शर्मा ओली र जवजको छातामा ओत लाग्न पाउँ भन्दै निवेदन हाल्नु हुनेछ ।
नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनको भविष्यको यो आलोकमा देशभरिका जवजका अनुयायीहरु को कता लाग्नु हुन्छ ? को कसरी बाँडिनु हुन्छ ? कसले कसलाइ समर्थन गर्नु हुन्छ ? नेता वा नीति कसको पछाडी लाग्नु हुन्छ ? यसको जिम्मा पनि तपाई स्वंयको निर्णय हो ? हाम्रो लागि पद ठुलो होइन, विचार र अडान ठुलो कुरा हो, यो नेकपाका देशभरीका नेता कार्यकर्ताले वुझन आवश्यक छ ।
Previous चेपुवामा नेपाल – चीनको टोलि नफर्कदै भारतीय टोली पनि दौडँदै आयो !
Next सनातन हिन्दु धर्मका २९ वटा आश्चर्यजनक रहस्यहरू जुन मानव जातिले कहिल्यै जान्ने छैनन